Qaxootiga Afgaanistaan ​​- Isbahaysiga Caafimaadka Soogalootiga & Qaxootiga
Bogga ugu weyn / Daryeelka caafimaadka /
Bishii Ogosto 2021, in ka badan 100,000 oo u dhashay Afgaanistaan ​​ayaa laga soo daadgureeyay Afgaanistaan. Dadka la soo daadgureeyay waxaa ku jiray shaqsiyaad Mareykanka kala soo shaqeeyay Afgaanistaan, xubnaha qoyskooda iyo kooxaha kale ee nugul. Qaar ka mid ah waxaa si degdeg ah dib u dejin loogu sameeyay qaraabo ku sugan Mareykanka oo leh sharci deganansho rasmi ah (LPR ama "kaarka cagaaran"). Kuwo kale ayaa si ku meel gaar ah loo dejiyay saldhigyo ciidan iyadoo loo sii marayo Operation Allies Welcome (OAW), kaas oo abuuray tas-hiilaad nololeed oo la wadaago oo loo yaqaan "Habab Nabdoon" oo lagu dejiyo qaxootiga inta ay sugayaan dib u dejin. Kahor inta aan qaxootiga Afgaanistaan ​​si badbaado leh loo dejin, waa inay maraan baaritaan caafimaad iyo habayn. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan habka baaritaanka, fadlan tixraac our Bogga Ilaha Caafimaadka.
Waqtigan xaadirka ah, hadafku waa in dib-u-dejin lagu sameeyo qaxootiga Afgaanistaan ​​​​hadda ku sugan meelo ammaan ah bartamaha Febraayo 2022. Ilaa hadda, ku dhawaad ​​800 oo qaxooti ah ayaa la dajiyay gobolka Washington, iyadoo dadaallada dib-u-dejinta diiradda lagu saaray shan goobood: Seattle (King County), Bellingham (Degmada Whatcom), Tacoma (Degmada Pierce), Yakima iyo Spokane. Qaxoontiga Afgaanistaan ​​​​ah ee sugaya raritaanku waxay haystaan ​​mid ka mid ah saddexda xaaladood ee sharci:
Codsadayaasha fiisaha soogalootiga gaarka ah (SIV).Codsadayaasha waxaa u shaqeeya ama u shaqeeya Mareykanka waxayna heli doonaan fiisaha muhaajiriinta. Xubnaha qoyskooda sidoo kale waa u banaan yihiin.
Sii-daynta sharafeed bini'aadantinimoXaaladdan ayaa bixisa gelitaanka ku meel gaadhka ah ee Maraykanka sababo bini'aadantinimo ama natiijada xaalad degdeg ah. Magacaabiddan waxa loo adeegsaday in si degdeg ah loo raro shakhsiyaadka ay u badan tahay inay magangelyo weydiistaan.
SQ/SI Sii-daynta sharafeedShakhsiyaadka qaba codsiyada la sugayo heerka SIV.
Dhammaan saddexda xaaladood ee qaxoonti ee kor ku xusan waxay xaq u leeyihiin dheefaha bilowga ah ee Xafiiska Dib-u-dejinta Qaxoontiga (ORR), oo ay ku jiraan Kaalmada Lacagta Qaxoontiga, Kaalmada Caafimaadka Qaxoontiga iyo Barnaamijka Deeqaha Ku-habboon ee ORR (faa'iidooyinka la heli karo ilaa siddeed bilood laga bilaabo taariikhda u-qalmitaanka). Intaa waxaa dheer, qaxootiga leh shuruudaha kor ku xusan waxay xaq u yeelan doonaan adeegyada qaarkood, oo ay ku jiraan barnaamijyada gaarka ah iyo kaalmada shaqada (adeegyada la heli karo ilaa shan sano laga bilaabo taariikhda u-qalmitaanka).
February 1, 2022 – Sida laga soo xigtay an war ka soo baxay USCIS, Muwaadiniinta Afgaanistaan ​​ah ee ku yimid Maraykanka ee hawlgalka Allies Soo-dhaweynta oo buuxinaya hagaajinta xaaladda looma baahna inay maraan baaritaan caafimaad ama fayl kale Form I-693 codsigooda haddii shuruudahan soo socda la buuxiyo:
Waxay ku mareen baadhis caafimaad socdaal oo uu sameeyay dhakhtar guddi ah meel ka baxsan Maraykanka oo looma ogolaan sababo caafimaad
Warbixinta baaritaanka caafimaadku waxay ku jirtaa galkooda
Baaritaanka caafimaadka socdaalka waxaa la dhameeyay wax aan ka badneyn 4 sano ka hor taariikhda codsigooda wax ka beddelka xaaladda
Ma jiraan wax caddayn ah oo muujinaya inay heleen xaalad caafimaad oo heerka A ah ka dib markay soo galeen Maraykanka
Faahfaahin dheeraad ah, fadlan eeg Buugga Siyaasadda USCIS iyo Macluumaadka Afgaanistaan ​​​​.
Dib u dejinta FAQ
Dalka Mareykanka, dib u dejinta qaxootiga waxaa maamula hay'ado dowladeed oo badan, hanaankuna wuxuu noqon karaa mid adag. Hoos waxaa ku yaal jawaabaha qaar ka mid ah su'aalaha caadiga ah ee la xiriira habkan:
Waa maxay qaxootigu?
A qaxootiga waa qof lagu qasbay inuu ka tago dalkiisa si uu uga baxsado dagaal, cadaadis ama masiibo dabiici ah. An soogalooti waa qof dalkiisa ka taga oo doorta inuu dal kale dego.
Waa maxay tillaabooyinka habka dib u dejinta qaxootiga?
Wakaaladaha ku lug leh: Waaxda Amniga Gudaha (DHS) iyo Adeegyada Muwaadinka iyo Socdaalka Mareykanka (USCIS)
Baaritaanka hore ee shaqaalaha Xarunta Taageerada Dib-u-dejinta (RSC).
Wareysi goobta ah ee USCIS Refugee Corps
Nadiifinta amniga iyo ka qaadista faraha
Meelaynta (30 ilaa 90 maalmood)
Wakaaladaha ku lug leh: Xafiiska Waaxda Gobolka ee Dadka iyo Qaxootiga & Socdaalka
Qoondaynta meelaynta iyada oo loo marayo sagaal hay'adood oo dib-u-dejineed iskaa wax u qabso ah (RAs)
Hanuuninta dhaqanka iyo habaynta bixitaanka
Soo dhawaynta hore iyo beddelka (30 ilaa 90 maalmood gudaha Maraykanka)
Wakaaladaha ku lug leh: Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Dadweynaha Xafiiska Dejinta Qaxootiga
Lacag caddaan ah iyo gargaar caafimaad
Adeegyada shaqada, ESL, baadhis caafimaad, dib u shahaado
Wixii macluumaad dheeraad ah, daawo muuqaalkan toddobo daqiiqo ah oo ka socda Wareegtada: "Yaa qaxoonti ah iyo siday ku yimaadaan Maraykanka? "
Waa maxay Wakaalada Dib udejinta (RA)?
Wakaaladda Dib-u-dejinta (RA) waxay bixisaa kaalmo dib-u-dejin waxayna u adeegtaa sidii kafaala-qaadka ugu horreeya ee qaxootiga soo galaya Maraykanka. RA-yadani waxay qandaraas kula jiraan Waaxda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka si ay u bixiyaan adeegyada qaxootiga, sida qaabilaada, hanuuninta aasaasiga ah, la talinta, cuntada, hoyga iyo adeegyada caafimaadka. Sagaalka RA ee dalka oo dhan, shan waxay ku yaalaan gobolka WA. Kuwani waa:
Guddiga Samatabbixinta Caalamiga ah (IRC)
Adeegga Qoyska Yuhuuda
Adeegyada Beesha Lutheran NW (xafiisyada ku yaal Tacoma iyo Vancouver, WA)
Caawinta Adduunka (xafiisyada ku yaal Kent/Seattle, Spokane iyo Saddex-magaalo)
Yaa go'aaminaya halka ay qaxootigu ka degaan Maraykanka iyo sidee?
Halka ay qaxoontiga dib u dajinayaan ee Maraykanka waxa go'aamiya RA-yada u adeegaya iyo shabakadooda la-hawlgalayaasha bulshada. Haddii qaxootigu uu qoys ama xiriiro ku leeyahay gudaha Mareykanka mar hore, taasi waxay sidoo kale door ka qaadan kartaa go'aaminta halka shaqsiyaadku dib u dajin doonaan.
Shaxda u-qalmitaanka caymiska caafimaadka ee qaxootiga
Ilaha kiliinikada ee bixiyayaasha daryeelka caafimaadka ee u adeegaya qaxootiga
La soo dhaafay: 12 / 08 / 2021